एकदुई जनाले निर्णय गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको अप्रेसनमा डाक्टरको समूह नै सहभागी – सजल सन्देश
एकदुई जनाले निर्णय गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको अप्रेसनमा डाक्टरको समूह नै सहभागी
By Sajal sandesh	 On१२ मंसिर २०७६, बिहीबार ०३:५७
काठमान्डौ – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्यमा आएको अर्को जटिल चुनौतीको सामना गरेका छन्।
मिर्गौला रोगको उपचार गराइरहेका उनको पेटमा संक्रमण फैलिएकाले जीवन जोखिममा परेको थियो।
तर, डाक्टर समूहले छोटो समयमा उचित निर्णय गर्दा ओलीको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
१२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि अर्को मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले उनी नियमित डायलाइसिसमा छन्।
तर, यसबीचमा पनि उत्तिकै सक्रिय उनलाई सोमबार मध्यरातिबाट अचानक पेट दुख्न थालेको थियो । पेटको दुखाइ बढ्दै गएपछि मंगलबार बिहान उनको निजी सचिवालयले निजी चिकित्सक डा। दिव्यासिंह शाहलाई खबर गरेको थियो ।
शाह बालुवाटार पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली असैह्य पीडाले छटपटाइरहेका थिए । शाहले मुटुरोग विशेषज्ञ डा। अरुण सायमीलाई खबर गरेपछि ओलीलाई शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा लग्ने निधो भएको थियो।
यो सेन्टर मूलतः मुटुरोगसम्बन्धी हो, यहा“को आइसियू अत्याधुनिक र व्यवस्थित भएकाले ओलीलाई अरू समस्या हु“दा पनि यो अस्पताल लग्ने गरिएको छ ।
मंगलबार बिहान करिब साढे ९ बजे ओली अस्पताल पुग्दा नपुग्दै सम्बन्धित सबैजसो डाक्टर जम्मा भइरहेका थिए । ‘तर, सेन्टरमा आइसियू खाली थिएन । त्यसैले अर्को कोठालाई तुरुन्तै आइसियूमा परिणत गरियो, हामीसँग समय थिएन । अप्रेसनको तयारी पनि तुरुन्तै भयो,’ डा‍ सायमीले भने।
ओलीलाई ‘एपेन्डिसाइटिस’ भएको प्रारम्भिक अनुमान थियो । तर, ‘एपेन्डिक्स’को संक्रमण फैलिएर आन्द्रासम्म पुगेको थियो अर्थात् उनलाई ‘पेरिटोनाइटिस’ भएको थियो । ‘संक्रमण फैलँदो थियो । त्यसैले अप्रेसनअघि र पछि पनि संक्रमण फैलने र अनियन्त्रित हुने जोखिम थियो ।
प्रधानमन्त्रीको जटिल स्वास्थ्य अवस्थालाई देखेर एक–दुईजना डाक्टरले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले ठूलो समूहलाई सामेल गराइएको थियो,’ उपचारमा संलग्न एक डाक्टरले भने, ‘सामूहिक निर्णयले तुरुन्तै अप्रेसन सुरु गरिएको हो।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा‍. शाहबाहेक सेन्टरका प्रमुख डा‍. उत्तम श्रेष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ डा‍. सायमी र डा‍.भगवान कोइराला, सर्जरी विभागका रमेशसिंह भण्डारी र डा‍. पलेस्वा जोशी, एनेस्थेसियाका डा‍. सुभाष आचार्य र डा‍. विश्वास प्रधानलगायतको टोली यो प्रक्रियामा सहभागी थियो ।
सर्जरी विभागका डा. भण्डारी र डा‍‍. पलेस्वाले प्रधानमत्रीको शल्यक्रिया गरेका थिए । करिब ४५ मिनेटको शल्यक्रियापछि उनलाई आइसियूमा सारिएको थियो । आइसियूमा प्रधानमन्त्रीको रेखदेख गर्न डा. सुभाष आचार्य र डा. विभुष श्रेष्ठ तयार थिए । हरेक घन्टा प्रधानमन्त्रीको रगत, पिसाबलगायत स्वास्थ्य जा“च भइरहेको थियो ।
मुख्यतः उनको ब्लडप्रेसर कम भएकाले डाक्टरहरू गम्भीर थिए । उता एन्टिबायोटिक औषधिले अप्रेसनको घाउ निको हुने मात्र होइन, पेटको संक्रमण पनि नियन्त्रण गर्ने डाक्टरहरूको अपेक्षा थियो । तर, बुधबार बिहानसम्म आएका रिपोर्टहरूले डाक्टरहरूलाई पनि सन्तोष दिएको छ।
‘संक्रमण धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको देखियो, त्यसैले उहाँको अप्रेसन गर्दा मुखमा राखिएको मास्क हटाइयो,’ डा. सायमीले भने, ‘हामीले अपेक्षा गरेकै गतिमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ, केही झोल पनि खानुभयो। उहाँ कुर्सीमा पनि बस्नुभयो, मैले त अब फेरि पोखरातिर जान मन लागिसक्यो होला होइन भनेर पनि जिस्क्याएँ।’
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सुधार भए पनि उनलाई आइसियूमै राखिएको छ।
अस्पतालका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा तीन दिन आइसियूमा राखिनेछ । सामान्य वार्डमा सार्दा भेट्न आउनेको भिड हुने भन्दै अस्पतालले संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन पनि ओलीलाई आइसियूमै राखिएको छ । श्रीमती राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासहित सचिवालय र परिवारका सदस्यबाहेकलाई भेट्न दिइएको छैन।
ओलीका दुई सल्लाहकारबीच ठाकठुक !